Unonophelo oluyimfuneko lokugcina i-Ambulia kwi-aquarium yakho | Ngeentlanzi
Ukuhombisa kunye nokwenza indalo yeentlanzi zethu singazisebenzisa zombini izityalo ezingezizo ezendalo. Ke ngoko, namhlanje siza kuthetha ngesityalo sohlobo lweLimnophyla esibizwa iambulensi (ILimnophyla sessiliflora).
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi malunga nokunyamekela nokusetyenziswa kwesi sityalo kwi-aquarium yakho?
1 Iimpawu ze-Ambulia
2 Iimfuno kunye nokukhathalela
3 Izinto eziluncedo ze-Ambulia
4 Izidingo zokuyikhulisa kunye namaxabiso
Ngokubanzi, bonke abantu abane-aquarium kwaye basebenzise izityalo eziphilayo kumhombiso wabo bajonge izityalo zolu hlobo. Izizathu zibangelwa yimbonakalo yazo, umbala oluhlaza ocacileyo kunye nokulula kwayo, kokubini kulimo kunye nokugcinwa. I-Ambulia sesinye sezona zityalo zigcinwayo yolu didi ngokubonakala kwayo kunye nombala onamandla.
Ivela kumazantsi mpuma eAsia kwaye ihlala kwiindawo apho amanzi anemisinga emincinci kakhulu okanye engenawo kwaphela. Zibekwe phakathi kunye neendawo eziphezulu kwinqanaba lamanzi. Ezo zikufuphi nomphezulu zingumqobo kwezinye izityalo kufutshane nokwenza i-photosynthesis, kuba zihlala kwindawo enkulu kakhulu.
Enkosi ngombala wayo kunye nokuma kwawo okunamagqabi, ifumana ukuthandwa kakhulu ngabo bonke abasemanzini. Inenxalenye yesityalo eyenziwe ngesiqu esimalunga neemilimitha ezine okanye ezintlanu ububanzi eyahlulahlulwe yaba zii-internode ezininzi ngaphezulu okanye ngaphantsi kwe-centimeter enye ukwahlukana. Amagqabi avela kwelinye ngalinye, ubume bawo buqulathe inzwa esembindini kwaye ingqongwe ziithambo zamagqabi. Amagqabi abekwe ngokungathi ngumthi wesundu. Oko kukuthi, izandiso ezininzi zenziwa. Ukudubula okutsha okulandelayo kunokuvela kwi-internode nganye kwaye, ngexeshana elifutshane, kunokuba yinto entsha kwakhona.
Enye yezona ndawo zinomtsalane kwisityalo zifumaneka kweyona ndawo iphezulu yesiqu. Yintloko eqhelekileyo yamagqabi amatsha akhula ngokungenammiselo. Iingcambu zifunyenwe kwelona candelo lisezantsi lesiqu kwaye zihlala zinxibelelana ne-substrate. Zimhlophe. Esi sityalo sinophawu olukhethekileyo lokuba iingcambu zinokuphuma kwii-internode ezikumgama ophezulu ukusuka emhlabeni.
Isityalo sonke sinombala oluhlaza ogqamileyo kwaye oqaqambileyo kwaye ukuba iimeko zokukhanya zilungile baya kubonelela ngombala ofana nalowo weemerald. Ngokumalunga nokuphakama, kunokuthiwa iziqu zifikelela kwisiqingatha semitha ubude, ngesiqhelo, nangona zinokufikelela ubude bemitha enye. Ukugcina ezi zityalo zikwimeko esempilweni, Siya kufuna i-aquariums ezinkulu.
Iimfuno kunye nokukhathalela
Esi sityalo asifuni kakhulu xa kufikwa kulimo kunye nokugcinwa. Ukuba ikhule ngokuchanekileyo, inokukhula iye kwii-intshi ezimbini ngeveki nganye. Bayazilungelelanisa kakuhle kwiindidi ezininzi zamanzi kunye nokukhanya. Ngokuyinika inkathalo encinci, sinokuba nayo ngamandla kwaye igcwele umbala.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, xa unikwe ubungakanani isityalo esinokufikelela kubo kunye nenqanaba lokukhula ngokukhawuleza, kubalulekile ukuba ube kwi-aquarium. ngobude obungaphezulu okanye ngaphantsi kwe-50 cm okanye nangaphezulu. Ukuba unayo i-aquarium encinci, kuya kufuneka uyiprune rhoqo. Imfuneko ekufuneka ubenayo yi-substrate equlathe ukutya okuziinkozo okuphakathi kunye nezityebi kwizimbiwa (ngakumbi isinyithi, esenza ukuba kuphile umbala oluhlaza) Iinkozo ozibeka kwi-substrate akufuneki ukuba zixineke kakhulu, kuba iingcambu ze-Ambulia zibuthathaka kakhulu. Ngokukhawuleza ukuba buthathaka kancinci, bathambekele ekubolekeni.
Ngokumalunga nobungakanani bokukhanya abakudingayo, kuhlala kunjalo phakathi kwe-0,7 kunye ne-1,5 watts kwilitha nganye yamanzi. Ukuba ingaphantsi kwesi sixa, isityalo asizukukwazi ukukhula kwaye, ngokuchaseneyo, siphezulu, siya kugqibela ngokutsha ngenxa yokwanela. Ukukhanya okungcono ukuze ikhule kakuhle kwaye igcine umbala wayo oluhlaza ocacileyo kukukhanya okumhlophe kwe-monochromatic.
Ngokumalunga ne-pH eyimfuneko ukuze isityalo siphile kakuhle, kufuneka sibekhona phakathi kwe-6 ne-8,5, Ubunzima buphakathi kwe-5 kunye ne-30 ° dGH. Ubushushu be amanzi kufuneka abephakathi kwama-22 nama-30 ° CNangona ezi zityalo zikwazi ukumelana notshintsho ngequbuliso kubushushu ngaphandle kweengxaki. Ukukhula okuphezulu kakhulu okunokufunyanwa sisityalo kuphakathi kwama-24 nama-27 ° C. Ukuba amanzi angaphezulu kwala maqondo obushushu, aya kukhula kancinci kwaye ukuba angaphantsi ngokulinganayo. Imida yokuphila yesityalo iphakathi kwe-20 kunye ne-30 ° C.
Kucetyiswa kakhulu ukuchumisa esi sityalo kanye ngeveki ngesichumisi esikhethekileyo solwelo kwizityalo zasemanzini. Kufuneka ihlawulwe kwakhona kanye ngenyanga ngesichumisi esingamanzi kwiipilisi ezingcwatyelwe ecaleni kwesiqu.
Kuba isiqu siethe-ethe kakhulu, kufuneka sigcinwe kwiindawo apho imisinga yamanzi iphakathi okanye ingasebenzi. Ukusasazeka kwe-CO2 emanzini kunceda ukukhula kwayo.
Esi sityalo silungele ukuhombisa amachibi angaphandle, hayi ama-aquariums kuphela. Kwezi meko zangaphandle ziyakwazi ukunyamezela ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo emini nasemilanjeni eguqula amaqondo obushushu emini nasebusuku. Akunakwenzeka yigcine kwiindawo apho iqondo lobushushu elihleliyo lihla ngaphantsi kwe-20 ° C.
Izinto eziluncedo ze-Ambulia
Esi sityalo silunge kakhulu kwezo tropical kunye neendawo ezinamanzi eziphakathi. Ngaphandle kokuhombisa, iyakwazi ukungenisa amanzi emanzini, kuba ikhupha isixa esikhulu senitrate emanzini ngokukhula ngokukhawuleza okukhulu.
Akulungele ukuba nazo kunye neentlanzi ezidla ukutya ngenxa yokuba zibuthathaka. I-aquariums apho isempilweni yezo ziintlanzi ze-ovoviviparous ezinje guppies kunye neplatties.
Izidingo zokuyikhulisa kunye namaxabiso
Esi sityalo kufuneka sibekwe kwindawo engasemva ye-aquarium. Ukuba zizityalo ezikhulu, unokubeka ezincinci ezifuna ukukhanya okuncinci ngaphantsi kwazo. Ukuba ubona ukuba kunokulimaza ukukhula kwezinye izityalo xa zinikwe ukuphakama kwazo, kufuneka uzithene ngakumbi.
Esi sityalo sinokuvelisa ngokuzisika, ukusika intloko yesiqu malunga ne-10 cm ukusuka kwisityalo kwaye ungcwabe eso siqwenga kwi-substrate. Kwiintsuku ezintathu okanye ezine iya kuthatha iingcambu kwaye isityalo esitsha siya kuphuhla. Kulungile ukususa amagqabi kwinxalenye yesiqu esiya kungcwatywa ukuze incede ekukhuleni kweengcambu kwaye kuthintele ukusika ekuboleni.
Zingasasazwa ngembewu, nangona zineembewu, kufanelekile ukuba isityalo sibe neesentimitha ezimbalwa emanzini. Imbewu ingathathwa kwiziqhamo ezivuthiweyo kwaye ingcwatyelwe ngqo kwi-substrate ye-aquarium. Umahluko phakathi kwembewu kunye nokusika kukuba eyokuqala inokwenziwa kuphela ehlotyeni kwaye ukuba isityalo singaphandle. Ukusika unyaka wonke.
Ungayifumana i-Ambulia yamaxabiso akoluhlu phakathi kwe-3 kunye ne-10 euro. Nje ukuba unayo, unokuyivelisa kwakhona ngokusika.
Ngolu lwazi ndiyathemba ukuba ungonwabela i-Ambulia yakho ngokuchanekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izityalo ze-Aquarium » I-Ambulia